Wadada Tareenka ee Dhuxusha ayaa qaadi doonta Dalxiisayaasha | RayHaber | raillynews
HometareenkaNidaamka Isgaadhsiinta ee IntercityJidka tareenka ee loo yaqaan Coal Will Carry Tourists
10 / 05 / 2018 Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Baaxadda mashruuca eniz Railway to Coal ”ee Wakaaladda Horumarinta Badda Madow, daraasad duulimaad ayaa la sameeyay si loogu soo bandhigo wadada tareenka ee Zonguldak-Kozlu-Üzülmez dalxiiska. Elif Acar, Xoghayaha Guud ee BAKKA, wuxuu yidhi, “Kadib markaan abuurno fikirkaan, waxaan la kulmi doonnaa Tareenka Gobolka oo aan bilaabi doonnaa u diyaar garowga tareenka fikradaha. Waxaan ugu ololayn doonnaa abuurista gaariyo waaweyn oo dalxiis ah. ”
Wakaaladda Horumarinta Badda Madow ee Reer Galbeedka (BAKKA) 'Wadada tareenka ee loo yaqaan dhuxusha' mashruuca si loo keeno wadada tareenka ee Zonguldak-Üzülmez-Kozlu ayaa loo abaabulay. Marka lagu daro wakiillada shirkadaha qandaraasleyda ah ee fulinaya fikradda horumarinta iyo hor-u-suurta-galnimada daraasadda, Xog-hayaha guud ee BAKKA Elif Acar, Madaxweynaha TSO Metin Demir, qorsheyaasha gobolka ee magaalada iyo naqshadeeyeyaasha naqshadeynta ayaa weheliyay safarka garoonka. Lugta koowaad ee safarka, oo ka bilaabmaysa gobolka Zonguldak Kozlu waxaa fuliyay tareenka TTK'ya. Laga soo bilaabo bartamaha magaalada iyo xarunta tareenka ee xaafada Çaydamar ka dibna loo maro Tunnels Kozlu xaafadiisa İhsaniye iyo xarunta degmada waxaa lasiiyay gaadiid. Safarkii Kozlu kadib, markan safarka waxaa loo aaday aagga Üzülmez.
"Waxaan bilaabi doonnaa diyaarinta on tareenka fikradda"
Xoghayaha Wakaaladda Horumarinta Badda Madow ee Elif Acar, khadka tareenka ee Kozlu-Üzülmez wuxuu ka bilaabay dalxiis si uu u sii wado daraasadda wuxuu sheegay inay sameeyeen safar dhul ah. Acar wuxuu cadeeyay inay fursad u heleen inay khibrad qadka tareenka la wadaagaan dhamaan saamileyda mashruucan wuxuuna yiri, miy Miyaan dib u cusbooneysiin karnaa khadka tareenka ee Kozlu Üzülmez inta ay ku egtahay masaafada dalxiiska? Waxaan rabnay inaan keeno dalxiis. Waxaan la nimid dhammaan qeybaha ay quseyso oo aan shir la qabanay. Ka dib waxaan rabnay inaan aragno khadka ku yaal garoonka. Turkey Dhuxul Hay'adda na siiyey taageero weyn ee arrintan la xiriira. Xaaladda guud, waxaan fursad u helnay inaan khibrad ku helno khadka tareenka ee lala galo daneeyayaashayada. Khibrad aad u kala duwan ayaa annaga noo ah. Kadib markaan abuurno fikirkaan, waxaan la kulmi doonnaa Tareenka Gobolka oo aan bilaabi doonna u diyaargarowga tareenka fikirka. Waxaan u ololeyn doonnaa abuuritaanka gaariyo waaweyn oo dalxiis. Waxaan rajeynayaa inay faa iido u tahay gobolka iyo gobolka. ”
'Taageero labada dalxiis iyo isu socodka magaalooyinka'
Metin Demir, Madaxweynaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Zonguldak, ayaa sheegay in khadka tareenka uu taageeri karo labada dalxiis iyo kan magaalada gudaheeda.
Khadku ma ahan khad aan ogin, laakiin waa khadka aan adeegsan jirnay, laakiin maanta waxaan la shaqeyneynaa saaxiibadeena ka baxsan magaalada. Sidaad ogtahay, sanadkii la soo dhaafay, waxaan soo saarnay mashruuc loogu magac daray Demir Railway to Coal Batı wakaaladeena horumarinta badda cas. Markii dambe, waxaa loo tarjumay fikradda dalxiiska ee loo yaqaan Yolculuk Journey si loo gaaro Butterfly's Riyada ”. Waxaan ka shaqeyneynaa xirmo balaaran oo dalxiis ah oo ka imaan doona Ankara ilaa Zonguldak iyo waxaan siin doonaa ka qeybgalayaasha khibradaha gobolka Western Black Sea. Khadadka u dhexeeya kozlu yar iyo bartamaha iyo tagista Üzülmez ayaa loo isticmaali karaa labadaba marin dalxiis oo dhibaato ayaan ku qabnaa gaadiidka magaalada. Maanta, waxaan dib u qiimeyn ku sameyn karnaa arintaan khabiirkeena gaadiidka iyo asxaabteena si fiican u yaqaan safkaan aagga maxaliga ah. Saamiyada aan maanta leenahay ka dib, waxaan ka dhigi doonnaa warbixin kama dambays ah oo haddii aan tan ku guuleysan karno, ujeeddadeena ugu weyni waa inaan u adeegsanno xariiqan gaagaaban ujeeddooyinka socdaalka magaalooyinka iyo ujeedooyinka dalxiiska.
"Waxaan dooneynaa in taariikhdan ay dhaqan u rogo"
Taariikhyahan cilmi baadhe oo qoraa ah Ekrem Murat Zaman ayaa yidhi, uan ​​Waxaan hadda samaynaynaa go'aan qaadashada wadada tareenka ee la qorsheeyay in laga tago Kozlu, oo ah ururka BAKKA, kuna taga Üzülmez. Waxaan rabnaa in tareenkaan uu ku noolaado marka hore. Waxaan dooneynaa taariikhdan inay dhaqan u rogaan. In kasta oo aan taas rabno, waxaan rabnaa in dhammaan xarumaha warshadaha bulshada laga bilaabo Kozlu illaa Üzülmez la aqoonsado wadada tareenka. Suurtagal ma tahay in loo adeegsado waddadan khaas ahaan tareennada wadooyinka tareenka ee nostalgia ayadoon la carqaladeynin shaqooyinka dhuxusha inta howlahan oo dhan ay socdaan? Marka lagu daro gaadiidka dhuxusha ee wadadan, waxaan baarnaa waxa la sameyn karo. Mawduuc kasta oo halkan ku yaal wuxuu leeyahay khabiir. Laga soo bilaabo naqshadeeyaha tareenka iyo qorsheeyaha magaalada, qof kasta oo qaabeeyey shaqadan hadda wuxuu qabanayaa shaqadiisii ​​ugu horeysay. Taasi waa sababta safarkayagii labaad ee maanta, aan uga soo baxnay dekada qaab aad u ballaaran, waxaan u nimid Kozlu, waxaan u gudbi doonaa Üzülmez. Jiritaanka wadada tareenka ee u dhaxaysa Üzülmez lauvarı iyo Kozlu lauvarı Maxaa laga qaban karaa tareenkan?
Tareenka loo maro Coal
Waxaa jira tareen, ma jirto gaadiidka dadweynaha ee tareenka
Socdaalka Dalxiis ee Baabuurka Kabaha
Dalxiisayaasha iyo cayaaraha Palandöken
Xarunta Badbaadinta ee Brezoviça Xarunta Dalxiiska ee Dalxiiska ee Balkans
Wadada Mersin ee Mersin si ay u bilaabaan dalxiisayaal ajaanib ah oo u socda Anamur
YHT ku saabsan ugaadhsiga dalxiiska
Wakaaladda Horumarinta Galbeedka Galbeedka Galbeed
Wasiir Arslan: Ili Dejinta Qaab-dhismeedka Cusub ee Taageerada Wasaaradda Badaha